Hometown Cha Cha Chaကို သင့်အနေနဲ့ ကျိန်းသေပေါက် ကြည့်သင့်တဲ့အချက်များ .. – Barnyar Barnyar
Hometown Cha Cha Chaကို သင့်အနေနဲ့ ကျိန်းသေပေါက် ကြည့်သင့်တဲ့အချက်များ
Shin Min Ah နဲ့ Kim Seon Ho တို့ဟာသအချစ်ဒရမ်မာတစ်ခုမှာအတူသရုပ်ဆောင်မယ်လို့တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ကတည်းကပရိသတ်တွေဟာရင်ခုန်နေခဲ့ကြပါတယ်…ဇာတ်လမ်းတွဲမစခင်မှာပဲပရိသတ်များဘက်ကသူတို့ကို “ပါးချိုင့်စုံတွဲ” လို့လည်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်….
Shin Min Ah ဟာသွားဆရာဝန် Yoon Hye Jin အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးသူမအထက်အရာရှိနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တာမလို့အလုပ်မှထွက်ပြီးအခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လာသူပါ…
သူမဟာစိတ်တွေပြန်လည်လန်းဆန်းစေဖို့ရာနယ်မြို့လေးတစ်မြို့သို့သွားခဲ့ပြီးနောက် Hong Doo Shik(Kim Seon Ho )ရဲ့အကူအညီကိုမှီခိုနေခဲ့ရပါတော့တယ်…Doo Shik ကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အလုပ်များစွာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ…
အဆိုပါစီးရီးရဲ့ပထမဆုံးရိုက်ချက်မှာတင်ပရိသတ်အားလုံးကိုလှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေနဲ့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်တော့တာပါပဲ…တစထက်တစ်စတိုးတက်နေတဲ့ Gongjin မြို့ငယ်လေးရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့လှပတဲ့ရှုခင်း တွေ… ဒါဟာတကယ့်ကိုလှပတဲ့အရာပဲနော် ခေတ်ကြိုက်ပရိသတ်တို့ရေ…Cinematographyကလည်းအရမ်းကိုသေသပ်ပြီးခမ်းနားမှုရှိပါတယ်…
ဒီစီးရီးကအားလုံးရင်ထဲကိုနွေးထွေးစေပါတယ်..Hye Jin ကပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ရေချိုးခန်းမှာသန့်ရှင်းရေးဖိနပ်ကိုဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှစတင်ပြီး သူမရဲ့ဖိနပ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်တွေဟာကလေးငယ်လေးကိုတောင်အတုလို့ထင်စေခဲ့တာမျိုး….
Doo Shikတစ်ယောက် နေရာတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာမျိုးကအလွန်ရယ်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်… နွေးထွေးမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားစေခဲ့ရတာကြောင့်ကြည့်မိသူတိုင်းပြုံးကြမှာအမှန်ပါပဲ…
Hye Jin လှေပေါ်မှဆင်းပြီးနောက် Doo Shik ကဒေသခံများနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးကြမှာပါနော်…ဒေသခံအားလုံးနဲ့Doo Shikရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ကြည့်ရှုသူကိုယ်တိုင်လည်းထပ်တူနွေးထွေးလာပြီးသူတို့တစ် ဦးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်စရိုက်များကိုလည်းဆက်လက်မြင်တွေ့ရဦးမှာပါ…
ပထမဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ Hong Doo Shik နဲ့Yoon Hye Jin တို့ကစိတ်ကူးယဉ်အချစ်စုံတွဲတစ်တွဲပုံ ဖြစ်မနေပါဘူး…ဒါပေမယ့်Hye Jinရဲ့အကြပ်အတည်းတွေကိုကူညီနိုင်တာDoo Shikတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်..နယ်မြို့လေးနောက်ခံအချစ်ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တို့ကပဲHometown Cha Cha Chaကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…
Hometown Cha Cha Chaကို သငျ့အနနေဲ့ ကြိနျးသပေေါကျ ကွညျ့သငျ့တဲ့အခကျြမြား
Shin Min Ah နဲ့ Kim Seon Ho တို့ဟာသအခဈြဒရမျမာတဈခုမှာအတူသရုပျဆောငျမယျလို့တရားဝငျကွငွောလိုကျကတညျးကပရိသတျတှဟောရငျခုနျနခေဲ့ကွပါတယျ…ဇာတျလမျးတှဲမစခငျမှာပဲပရိသတျမြားဘကျကသူတို့ကို “ပါးခြိုငျ့စုံတှဲ” လို့လညျးချေါဝျေါခဲ့ကွပါတယျ….
Shin Min Ah ဟာသှားဆရာဝနျ Yoon Hye Jin အဖွဈသရုပျဆောငျပွီးသူမအထကျအရာရှိနဲ့ရနျဖွဈခဲ့တာမလို့အလုပျမှထှကျပွီးအခွားနရောကိုပွောငျးရှလေ့ာသူပါ…
သူမဟာစိတျတှပွေနျလညျလနျးဆနျးစဖေို့ရာနယျမွို့လေးတဈမွို့သို့သှားခဲ့ပွီးနောကျ Hong Doo Shik(Kim Seon Ho )ရဲ့အကူအညီကိုမှီခိုနခေဲ့ရပါတော့တယျ…Doo Shik ကအလုပျလကျမဲ့ဖွဈပမေယျ့ထူးဆနျးတဲ့အလုပျမြားစှာရှိတဲ့သူတဈယောကျပါ…
အဆိုပါစီးရီးရဲ့ပထမဆုံးရိုကျခကျြမှာတငျပရိသတျအားလုံးကိုလှပတဲ့မွငျကှငျးတှနေဲ့စတငျမိတျဆကျလိုကျတော့တာပါပဲ…တစထကျတဈစတိုးတကျနတေဲ့ Gongjin မွို့ငယျလေးရဲ့သမုဒ်ဒရာနဲ့လှပတဲ့ရှုခငျး တှေ… ဒါဟာတကယျ့ကိုလှပတဲ့အရာပဲနျော ခတျေကွိုကျပရိသတျတို့ရေ…Cinematographyကလညျးအရမျးကိုသသေပျပွီးခမျးနားမှုရှိပါတယျ…
ဒီစီးရီးကအားလုံးရငျထဲကိုနှေးထှေးစပေါတယျ..Hye Jin ကပငျလယျစာစားသောကျဆိုငျရဲ့ရခြေိုးခနျးမှာသနျ့ရှငျးရေးဖိနပျကိုဝတျထားတဲ့အခြိနျမှစတငျပွီး သူမရဲ့ဖိနပျနှငျ့ပိုကျဆံအိတျတှဟောကလေးငယျလေးကိုတောငျအတုလို့ထငျစခေဲ့တာမြိုး….
Doo Shikတဈယောကျ နရောတိုငျးမှာအလုပျလုပျနတောမြိုးကအလှနျရယျစရာကောငျးလှနျးပါတယျ… နှေးထှေးမှုနှငျ့ပြျောရှငျမှုကိုခံစားစခေဲ့ရတာကွောငျ့ကွညျ့မိသူတိုငျးပွုံးကွမှာအမှနျပါပဲ…
Hye Jin လှပေျေါမှဆငျးပွီးနောကျ Doo Shik ကဒသေခံမြားနဲ့လညျးမိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့အပိုငျးကိုကွညျ့ပွီးကွမှာပါနျော…ဒသေခံအားလုံးနဲ့Doo Shikရဲ့အပွနျအလှနျဆကျဆံမှုတှကွေောငျ့ကွညျ့ရှုသူကိုယျတိုငျလညျးထပျတူနှေးထှေးလာပွီးသူတို့တဈ ဦးခငျြးစီရဲ့ကိုယျပိုငျစရိုကျမြားကိုလညျးဆကျလကျမွငျတှရေ့ဦးမှာပါ…
ပထမဇာတျလမျးတှဲမှာတော့ Hong Doo Shik နဲ့Yoon Hye Jin တို့ကစိတျကူးယဉျအခဈြစုံတှဲတဈတှဲပုံ ဖွဈမနပေါဘူး…ဒါပမေယျ့Hye Jinရဲ့အကွပျအတညျးတှကေိုကူညီနိုငျတာDoo Shikတဈယောကျပဲရှိပါတယျ..နယျမွို့လေးနောကျခံအခဈြဇာတျလမျးဘယျလိုလာမလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတျတို့ကပဲHometown Cha Cha Chaကိုစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါဦးနျော…